Ganzabee Dibaabaa IAAF World Athlete of the Year jedhamte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Ganzabee Dibaabaa IAAF World Athlete of the Year jedhamte
Ganzabeen gootittii atleetiksii bara 2015'ti
Gootittiin ateleet Ganzabee Dibaabaa atleetii addunyaa (IAAF WOLRD Athlete of the year) bara 2015 jedhamte. Ganzabeen muudama kana kan argatte woldorgommii atleetota dubartoota guutuu addunyaa gulantaa hundaa moo’atteeti.
Ganzabeen bara 2015’tti kallattii fiigichaa hedduun, irra caalatti mt 1500 fi mt 5000, injifannoo gurguddaa galmeessisaati kan turte. Moo’achuu qofa osoo hin taane yeroo garagaraatti rikoordii addunyaas fooyyessuu danda’u isiiti kan dinqisiifannaa fi kabajaa guddaa guutuu addunyaa irraa isii gonfachiise. Keessummaayyuu rikoordii meetira 1500 kan erga bara 1993 kaasee namuu cabsuu dadhabe caccabsuun isii ragaa cimina isii guddaa ture.
Atleetiin tuni baruma kanatti rikoordii fiigicha fageenya mt 5000, isa mana keessaa, harka isiitti galfatteerti. Fiigicha meetira 1500 si’a sadi irratti hirmaatteen moo’achuu qofa osoo hin taane rikoordiis fooyyessuu danda’uun isii badhaasa sadarkaa addunyaa kanaan isii gayeera.
‘Badhaasa kana argachuu kootiif kabajaa guddatu natti dhagayama,’ jette Ganzabeen. ‘Atleetii addunyaa jedhamanii muudamuun hedduu namatti tola.’
Woggaa dabres Ganzabeen xumuraaf dhiyaattee, garuu, osoo hin moo’atin hafte. Dirree fiigichaa irratti 1ffaa bayuu malee waan biraa kan hin beekne , Ganzabeen, bara kana atleetota gosa atleetiksii hunda irraa qooda fudhatan mara kan caaltu ta’uu isii IAAF World Athlete of the Year jedhamuu ragaan caalu tokko hinjiru. Barri 2015 kan Ganzabeeti!
Ganzabeen atleetota isitti aananii 2ffaa fi 3ffaa ta’uudhaan xumuraniif, ‘yeroon itti aanu keessan ta’uu nimala, ‘ jechuun jajjabeessite; abdachiiste.
Maatii,obbolewwan, lenjisaafi kanniin bifa addaddaan isii bira dhaabbatan hunda galateeffatteerti, Ganzabeen.
Gama worra dhiiraan atleetii addunyaa bara 2015 kanjedhame Ashton Eaton, lammii Ameerikaa, dha.
Muudama atleetii addunyaa kanaaf kan nama geessu sagalee dhuma irratti ogeeyyonni atleetiksii 10 laatanii.
Previous articleMormiin barattootaa ammas akkuma itti fufetti jedhama
Next articleBaqattoonni Itoophiyaa 105 gara A/Kibbaa deemuuf turan Tanzaaniyaa keessatti hidhaman